Filoha RAVALOMANANA Marc : "aoka izay ... atsaharo ny fiaraha-mitantana"
"Tsy rariny intsony ny zava-mitranga" hoy ny Filoha RAVALOMANANA nanameloka ny herisetra nataon'ny hery famoretana tamin'ny vahoaka ny sabotsy lasa teo. "Manome baiko aho" hoy izy "atsaharo tanteraka ny fandraisana anjara any anaty andrim-pitondrana". Fanapahan-kevitra hentitra izany mandra-piandry ny hevitry ny SADC manoloana ireny tranga ireny. Nomarihiny fa efa maro ny fandeferana nataon'ny Ankolafy tarihiny saingy tsy mifandanja amin'izany ny fihetsika asehon'ny sasany. Nambaran'ny Filoha fa efa fantatr'izao tontolo izao ny zava-nitranga ary manameloka izany ny an-kamaroany satria na dia ny fomba nampiasana ny grenady aza tsy manaraka ny fenitra amin'ny hetsi-bahoaka milamina.
Notakiany anefa ny hilazan'ny SADC ampahibemaso ny fanamelohany ireny fihetsika ireny fa tsy hanaovany toy ny mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hatreto tokoa aloha dia tsy mbola nisy nandrenesam-peo ireo milaza fa mpitondra fanjakana na dia ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita aza no nodarohina grenady manepotra sy mandatsa-dranomaso teo Ambohijatovo. Nozarain'ny Filoha RAVALOMANANA tamin'ny mpiara-mitolona rehetra ihany koa fa manohana izao fanapahan-kevitra noraisiny izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny fidiran'ny Ankolafy RAVALOMANANA tao anaty fiaraha-mitantana mantsy no mitondra ny fankatoavana iraisam-pirenena saingy tonga eo amin'ny fotoana tsy azo ileferana intsony ny Ankolafy koa dia ambivitra ny tosotsorimamba isarahana. "Aoka izay" hoy ny Filoha RAVALOMANANA "samia mandray ny andriakitra manandrify azy fa mijaly loatra ny vahoaka Malagasy".
15/02/2012 : Filoha RAVALOMANANA : tsy manadino ny tra-boina ...
"Tsy aritro ny tsy hankahery anareo na dia aty an-tany lavitra aza" hoy ny Filoha RAVALOMANANA raha nitafa mivantana teo amin'ny Kianjan'ny Finoana ny tenany. Niondrika am-panajana manoloana ireo mpiray tanindrazana namoy ny ainy nandritra ny fandalovan'i Giovanna ny tenany ary nankahery ireo maratra sy tsy manan-kialofana noho izany. "Tsaroako fa nisy nanampy betsaka isika tamin'ny fotoana nandalovan'ny rivodoza toy izao" hoy izy nampahatsiahy. Nambarany anefa fa ankehitriny dia tsy manan-katolotra ny FATE satria fitondrana tsy mbola ara-dalàna ka tsy mahazo fanampiana.
Nampitain'ny Filoha RAVALOMANANA ihany koa fa efa niantso Filoham-pirenena maro manerana ny tany ny tenany mba hijery izay azon'izy ireo atao hanampiana ny Malagasy. "Nilaza anefa ireto farany fa tsy maintsy hiera amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria tsy ara-dalàna ny mpitondra eto Madagasikara ka manahirana" hoy ihany ny Filoha. "Arak'izany" hoy izy " dia tsy maintsy ianareo aty an-tanindrazana no mijery izay fomba ahafahana mifanome tanana hanampy ireo tra-boina". Nomarihin'ny Filoha RAVALOMANANA ihany koa fa tsy misy ny fahalalahana miteny eto Madagasikara ka dia voatery ny mpiara-mitolona no niangaviany hampita izao hafatra izao amin'ny mpiray tanindrazana mba hahafantaran'izy ireo fa tsy manadino azy ny Filoha na dia any an-tany lavitra aza.
23/01/2012 : Filoha RAVALOMANANA : tsy miala ao anaty fiaramanidina raha tsy eto Antananarivo
Nankasitraka ny vahaoaka Malagasy iray manontolo ny Filoha RAVALOMANANA androany. Nisaorany manokana ireo afaka nihazo ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena niandry ny fahatongavany na dia tsy nahomby aza izany noho ny hetraketraky ny mpanongam-panjakana. "Hatramin'izao izahay dia mbola toy ny tsy miala ao anaty fiaramanidna satria mbola hotely no ipetrahanay" hoy ny Filoha "satria niteny mazava aho fa tsy hiala anaty fiaramanidina raha tsy any Antananarivo".
Ankoatra izany dia niondrika am-panajana noho ny fahalasanan'ny mpiara-mitolona ny Filoha RAVALOMANANA ary nankahery ny fianakaviana mana-manjo. "Tsy ataontsika latsaka an-tany izany ràn'ny Malagasy tia tanindrazana izany" hoy ihany izy. Isan'ny fehezanteny naverimberiny ny hoe "tsy misy afaka hanala ny fitiavako an'i Madagasikara" ary nambarany fa efa nanao izay azo natao izy ireo saingy efa taty amin'ny habakabaka Malagasy no naverina an-tanin'olona. Nampitain'ny Filoha tamin'ny mpiara-mitolona rehetra ary fa misy ny fivoriana tsy ara-potoana izay tarihin'ny TROIKA manomboka rahampitso ary efa nampanantsoina hanatrika izany ny ankolafy politika Malagasy koa dia miandry izay vokany isika fa "tsy maintsy ho tonga i Dada" hoy ihany ny Filoha RAVALOMANANA.
21/01/2012 : Tsy mivonona ny hipetraka ao Afrika Atsimo intsony ny filoha Marc RAVALOMANANA (+ lien vidéo euronews)
Ao amin'ny Sheraton Hotel ao Johannesbourg, ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpandeha ny Airlinks no mipetraka amin'izao fotoana izao. Ary ny fitondrana ao Afrika Atsimo no miantoka izay lany rehetra amin'izany. Tsy maintsy hiverina any Madagasikara izahay hoy filoha Marc Ravalomanana satria efa azonay ny tapakilanay. Fantatra fa manao ny atao hoe « refulling » ilay fiaramanidina, ary miandry ny fanapahan-kevitry ny kaompania-pitaterana dia mipody an-tanindrazana.Raha tsiahivina dia efa minitra sisa tsy hidinan'ny fiaramanidina teo amin'ny seranan'Ivato no nilatsaka ny Notam avy amin'ny Andry Rajoelina. Tamin'ny 14H10no tokony hidina ny seranan'Ivato ny fiaramanidina, tamin'ny 14H no nilatsaka ny Notam.Izany hoe 10 minitra no noterena nakatona ireo seranam-piaramanidina 5 eran'ny Madagasikara.
Sary tany anaty fiara manidina
Reportage Euronews : http://www.youtube.com/watch?v=siFW1LsdtsU
NOTAM_ORDONNANT_LA_FERMETURE_DE_TOUS_LES_AERODROMES_DE_MADAGASCAR.pdf 259.51 Ko
14/01/2012 : Filoha RAVALOMANANA : ho ampahafantariny amin’ny alarobia izao ny ora hiverenany
“Tonga ny fotoana , amin’ny Alarobia izao dia ho lazaiko aminareo ny andro hahatongavako”. Namaly ny fiandrasan’ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna tonga maro teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny fanambarana nataon’ny Filoha RAVALOMANANA Marc ary noraisin’ny vahoaka tamin-kafaliana tokoa. Fotoana iray tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra izao araka ny fanazavany satria efa diso mijaly loatra ny mpiray tanindrazana. Fahatelo alohan’ny farany amin’ny Firenena mahantra indrindra manerana ny tany no misy antsika amin’izao fotoana. Nihaona tamina mpitondra Afrikana maro ny tenany nandritra ny fankalazana ny tsingerintaonan’ny ANC tao Afrika Atsimo ,araka ny nambaran’ny Filoha RAVALOMANANA, ary talanjona amin’ny tsy mbola mahatafaverina azy aty an-tanindrazana ny ankamaroan’izy ireo.
Nijoroany vavolombelona ny traikefa nozarain’ny Filohan’ny Burundi taminy. Nolazain’ity farany fa mbola henjana lavitra noho ny tranga eto Madagasikara ny zava-nisy tany amin’io Firenena iray io saingy rehefa niroso tamin’ny fifampiresahana dia voavaha hatrany. “Tapakevitra aho” hoy ny Filoha “fa tsy maintsy hasehoko an’izao tontolo izao ny finiavako hamaha ny olana eto Madagasikara”. Nanteriny fa ny Alarobia ho avy izao no hambarany amin’ny vahoaka Malagasy ny andro hiverenany ary mpanao gazety iraisam-pirenena am-polony maro no hiara-dia aminy hijery ny zava-misy marina eto Madagasikara.